Ny aretina eo amin'ny ilany havia eo amin'ny taolam-paty - nahoana no mitranga ny havia havia, ny kibony havia, ny fomba hanesorana ny fanaintainana amin'ny ilany havia?
Ny fanaintainana eo amin'ny ilany havia eo amin'ny taolam-paty - ny antony rehetra sy ny fanafody mety hahitana soritr'aretina
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny fanaintainana eo amin'ny ilany havia eo amin'ny tendrony dia matetika hita ho tsy misy dikany. Na izany aza, ity mari-pamantarana avy amin'ny vatantsika ity dia mety ho toy ny klerjy voalohany mikasika olana ara-pahasalamana. Ao amin'ny faritra ao anatiny dia misy fombafomba tena manan-danja ary misy fandikana ny asan'ny iray amin'izy ireo dia mety hiteraka vokany mahatsiravina.
Ny fanaintainana eo amin'ny ilany havia
Koa satria ny ankamaroan'ny taova dia mifantoka ao amin'ny faritra miafina sy ny tonon-taolam-paty, ny fanaintainana eo amin'ny ilany havia ao amin'ny kibony dia afaka manondro ny fizotry ny aretina eo amin'ny tsirairay amin'izy ireo:
ao amin'ny vavony;
ao amin'ny ovy sy ny raboka diso;
ao amin'ny pancreas (PZH);
ao amin'ny havokavoka;
ao amin'ny tsina kely sy lehibe;
ao amin'ny voa sy ureter;
Ny habetsaky ny fanitsakitsahana mety dia tena lehibe tokoa, noho izany dia tsara indrindra ny tsy hanakiana ny anton'ny fanelingelenana ny haviao, fa mba hanolorana izany amin'ny manampahaizana manokana. Ny fanaintainana dia mety manalefaka, izany hoe, any ivelan'ny taova. Ny antony fototra mahatonga ny tsy fahatsapana dia ireto aretina manaraka ireto:
Ny gastro ao amin'ny vavony dia manitsakitsaka ny tsy fahampian'ny mitefy moka.
Ny pancreatitis - aretina mitaiza ny prostate dia azo hazavaina amin'ny fanaintainana mafy amin'ny havia.
Areti-mifindra sy aretina.
Ny fiantraikan'ny myokardika amin'ny endriny ambany, ankoatra ny fanaintainana ao an-kibo, matetika dia miaraka amin'ny tsy fahampian-tsakafo, hiccough, vomiting ary fandosirana.
Ny sori-dalan'ny gastrointestinal tract, izay azo lazaina, na amin'ny dysbiosis sy ny oncologie, dia manana soritr'aretina algika.
Na dia hita ao amin'ny faritra ambany ambany amin'ny lakolosy aza ny rafitra fitsaboana, dia azo lazaina ho marary mafy kokoa ny fanaintainana - eo amin'ny ilany havia eo amin'ny tavy.
Ny fihenan'ny nerve dia miteraka alahelo mafy sy mety ho fetra.
Mampihoron-koditra eo amin'ny ilany havia
Rehefa misy ny tsy fahamendrehana dia zava-dehibe ny mandinika ny sehatry ny fielezan'ny fanaintainana, fa koa ny fahasamihafana, ny faharetan'ny fakana an-keriny sy ny toetrany. Amin'ny alalan'ireo fepetra ireo dia afaka mamarana ny toetran'ny psykolojia. Ohatra, ny fanaintainan'ny alahelo amin'ny havia sy ny fihenanam-pitenenana dia mampiseho ny fivoaran'ny areti-maso, ny tsinay na ny rafitra fiompiana vehivavy.
Fanaintainana mafy amin'ny ilany havia
Tampotampoka teo, ny fanaintainana mafy tamin'ny havia dia mety vokatry ny herisetra mampihoron-koditra: ratra, fipoahana na fihetsiketsehana maranitra maranitra. Amin'ity tranga ity dia ilaina ny misafidy ny fihetsika tsara indrindra, izay tsy dia mibaribary loatra ny fisehon'ny algika ary miteraka fitsaboana maika. Tsara kokoa ny miala amin'ny fanafody fanaintainana toy ny fandeferana, mba hahatonga ny dokotera hahazo sary mifanaraka amin'izany.
Raha toa ka omena ao amin'ny faritra lonaka na ambany ny fihokoana, dia azo atao ny miahiahy ny fongotra na ny hainia na ny fisehoan'ny hernia. Amin'ity tranga ity dia tokony atao ny famaritana rongony iray, ary ny dokotera dia afaka manoratra ny fitsaboana tsy miankina, anisan'izany ny fanapahan-kevitra amin'ny fidirana amin'ny fitsaboana.
Fametahana eo amin'ny ilany havia
Matetika ny atleta tsy manana traikefa dia manasitrana ny homamiadana amin'ny ankavia, toy ny hoe ny colic. Ity famantarana avy amin'ny vatana ity dia tsy mampiahiahy, fa fampitandremana hafa. Ny vokatr'io soritr'aretina io dia ny fikarakarana tsy ara-dalàna ny fampiasana ara-batana sy fampiharana. Ohatra, sakafo mamaivay vetivety mialoha ny kilasy ao amin'ny toeram-pisakafoanana na tsy fanaovana tsinontsinona ny hafanana ary ny fiterahana ny hozatra alohan'ny hikorontana dia mety hiteraka fanaintainana mihelina eo amin'ny ilany havia amin'ny ambaratonga ambony eo amin'ny taolan'ny hypochondrium.
Izany dia satria ny ra avy amin'ny tahiry miafina dia manomboka mandatsaka am-pandrosoana lalina ao amin'ny asa fanasoavana. Raha tsy misy fampirimana mialoha, dia tsy mitombina ny fizarana rà ary tsy manana fotoana hiatrehana izany habetsa izany ny kalsa ary manomboka mampihatra ny tsindry amin'ny akorany. Amin'ity tranga ity dia maro ireo fofona lalina no hanampy, ary mba hisorohana ny fanaintainana dia ilaina ny manamarika ireto torohevitra manaraka ireto:
Tsy afaka manomboka fanazarana ara-batana aloha ianao mihoatra ny 40-60 minitra aorian'ny sakafo.
Tsy tokony hihoatra ny antsasak'adiny ny fiasàna mialoha ny herin'ny hery sy ny fanabeazana cardio.
Mandritra ny hazakazaka dia ilaina ny manara-maso ny fifehezana. Tokony ho tsara sy mahitsy izy io.
Tsy ilainao ny miresaka mandritra ny fiofanana, satria mety hiteraka herisetra izany.
Ny fihazonana mitovy dia ho toy ny fiantohana amin'ny ati-doha, satria tsy hisy na inona na inona hikotika ny diapragma.
Ny fihenan'ny fampiharana (mihazakazaka) dia tokony hampitombo hatrany, mba hahafahan'ny vatana mifanaraka amin'ny entana vaovao.
Raha misy fanaintainana, atsaharo ny fampiofanana, hampitony ny fihetseham-ponao, ary avy eo dia hihena ny fanaintainanao.
Ny fanosehana, ny fanaintainana eo amin'ny ilany havia eo amin'ny kibon'ny vehivavy dia mahazatra kokoa noho ny amin'ny lehilahy. Ity fisehoan-javatra ity dia azo hazavaina avy amin'ny fanjakana maromaro:
ny famokarana atodinaina,;
aretina enti-matavy avy amin'ny taolam-paty;
Ankoatra izany, misy antony hafa amin'ny karazana fisehoan-javatra algika, ohatra, aorian'ireo ratra sy mangana amin'ny fery marefo eo amin'ny faritra misy ny fanairana. Na ahoana na ahoana, rehefa hita fa misy soritraretina toy izany dia mila dokotera ianao mba hanazavana ny antony mahatonga ny fanaintainana sy hahazo ny fitsaboana ilaina.
Ny fanaintainana eo amin'ny ilany ankavia
Raha toa ka maratra miala avy eo anoloana miaraka amin'ny tondroin-dàlana mankany aoriana, dia afaka manohina ny raza ireto soritr'aretina ireto:
Ny fanaintainana ny fanaintainana aorian'ny trauma dia mety manondro ny fiterahana ny kalsioma, izay tsy misy fepetra maika dia miteraka ra mandriaka be loatra amin'ny vokatra mahafaty. Na izany aza, raha misy ny fahatsapana fanaintainana eo ambanin'ilay tavy, dia, angamba, ny psikology dia nisy fiantraikany teo amin'ny taovam-pananahana vehivavy. Mety ho:
Ny fanaintainana amin'ny ilany havia avy any aoriana
Rehefa maratra ny taolam-paty, ny zavatra voalohany azonao eritreretina dia ny sciatica. Na izany aza, ny fambara toy izany amin'ny fameperana ny fiasan'ny motera dia mety hiteny ihany koa ireo antony hafa mahatsiravina ao amin'ny faritra malemy:
aretina mifindra amin'ny taolam-paty, anisan'izany PPI;
Aretina amin'ny taratasy mivalona mahasalama: appendicitis;
aretina mandika ny metabolika: osteoporose.
Ny aretina eo amin'ny ankavia mandritra ny fitondrana vohoka
Ny fitarihana ankizy iray dia misy foana ny zavatra mampikorontan-tsaina. Ny zazakely iray mitombo dia misy fiantraikany goavambe eo amin'ny hazavana sy ny taova anatiny. Noho izany, rehefa manjary mianjera amin'ny lafiny havia ny andaniny, amin'ny ankapobeny, ny zava-drehetra dia nosoratana teo amin'ny toe-peo, toerana tsy mampahazo aina ilay zaza na reraka. Na izany aza, ny soritr'aretina toy izany dia mety hiteraka olana goavana:
cystitis sy ny areti-maso;
fanakanana ny uterine;
fanakanana ny tsinay.
Ahoana no hanamaivanana ny fanaintainana eo amin'ny ilany havia?
Tsy aretina ny pains, fa ny soritr'aretin'izy ireo, ka tsy mila mitondra azy ireo ianao, fa ny loharano. Ny vokatra vonjimaika dia manome voka-dratsy tsy ampoizina ary tsy azo ampiasaina fotsiny raha te hanamaivana ny fepetra alohan'ny hifandraisany amin'ny manam-pahaizana manokana:
Ibuklin sy ibuprofen;
Alohan'ny hanesorana ny fanaintainana eo amin'ny ilany havia amin'ny fanaintainana, mila mahatsiaro ianao fa:
Amin'ny fanaintainana lalina izay tsy azo sakanana amin'ny zava-mahadomelina, mba hahafahan'ny dokotera mameno ny toeram-pitsaboana manontolo ary manome haingana ny fanampiana ilaina.
Ireo fanafody dia manaisotra fotsiny ny fisehon'ny aretina, fa aza atao azy io, fa ny fanintelony fotsiny amin'ny dokotera dia hamonjy anao amin'ny fijaliana indray mandeha ary ho an'ny rehetra.
Tsy misy dikany ny fandinihan-tena sy ny fikarakarana ny tena, satria matetika dia tsy misy ny tsy fahatsapana ny taova.
Ny maso malemy - inona no tokony hatao?
Fanafody ho an'ny aretim-pivalanana - ny pharmacie tsara indrindra sy ny fitsaboana
Amelotex - famantarana ny fampiasana
Ahoana ny hanomezana fanazavana momba ny kankana ho an'ny atody kankana?
Urdoksa - mari-pamantarana ampiasaina
Mexiprim - famantarana ny fampiasana
Otitis externa - aretina sy fitsaboana amin'ny olon-dehibe
Ny sahona tsara indrindra ho an'ny trano fonenana
Ahoana no anaovanao sira?
Ahoana ny fomba fananganana efitrano fitafy?
Ampahany amin'ny mayonnaise ho an'ny pie
Ny fiasan'ny atidoha
Alefaso amin'ny sisin-tany: akanjo amin'ny ririnina
Lalao ho an'ny taona vaovao
Fialantsasatra any Costa Rica
Ahoana no handoavana lanja mandritra ny alina?
Herinandro boots tsy misy pôlisy 2013
Inona no mahasoa amin'ny radisy ho an'ny vatana ary inona no misy ao?
Lalana Water Park
Women's Jackets 2016
Ny Beatles sy Madonna dia raisina ho tsara indrindra amin'ireo mpandray anjara tsara indrindra